Tọzdee, Disemba 12, 2017 Friday, December 15, 2017 Douglas Karr
Conversica na-enye onye na-ere ahịa akpaaka na-arụ ọrụ nke akụrụngwa ọgụgụ isi. Onye nnyemaaka ahụ na-arụ ọrụ dịka onye inyeaka ahịa mmadụ, na-erute onye ọ bụla n’ime ndu gị ma na-etinye onye ọ bụla n’ime ha na mkparịta ụka mmadụ. Ndị mmadụ hụrụ ya n'anya n'ihi na onye inyeaka na-ahụ ihe, na-eme enyi ma na-anabata ya, na-ejikọ ha ngwa ngwa na mmadụ nwere ike inyere aka. Anyị nọ na mmiri AI. Echere m na maka ụlọ ọrụ ọ bụla, mgbanwe nke sayensị data ga-abụ isi